SoulsCraft2သည်အကောင်းဆုံး Android RPG များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Androidsis
ဗီယာ Monfort | | Android application များ, Android ဂိမ်းများ
SoulCraft 2: ကောင်းကင်တမန်လိဂ် အားဖြင့်, ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် MobileBits Gmbhဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ကစားနိုင်သောနှင့်နည်းပညာအရရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး RPG သို့မဟုတ် hack နှင့် slash တစ်ခုမှဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်၎င်း၏အောင်မြင်မှုအရယုတ္တိရှိသောအရာမှာနောက်ဆက်တွဲကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ SoulCraft2သည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း iOS, Windows Phone နှင့် Amazon Kindle တို့တွင်အလားတူပြုလုပ်ရန် Android သို့လာခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ်အများစုမှာပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်လေ့မရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
နည်းပညာအရအကောင်းဆုံး SoulCraft 2: Angels League ကအလွန်အမင်းချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမရှိသော်လည်းဇာတ်ကောင်များနှင့်ရန်သူများ၏မော်ဒယ်လ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမှုန်သက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကာတွန်းအသစ်များရှိခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဇာတ်လမ်းမူကားခေါင်းစဉ်ပါ ၀ င်သည် 36 မစ်ရှင် အရာ, ငါတို့ထင်, သူတို့ပြီးသားထိုအချိန်ကပြုသကဲ့သို့လာမည့်လအနည်းငယ်ကျော်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် multiplayer နှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်သောချဉ်းကပ်မှုရှိသည်။ မျှော်စင် - ကာကွယ်ရေး.
ဤခေါင်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့နိုင်သောကောင်းကင်တမန်ခုနစ်ပါးရှိသည် ချစ်သူ ယင်းတွင် application အတွင်းရှိငွေပေးချေမှုများပါ ၀ င်ပြီး၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ပါ ၀ င်သောဤအက္ခရာများကိုတိုးတက်စေရန်အဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမအပိုင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုတိုးတက်စေသည့်နောက်ဆက်တွဲကိုရင်ဆိုင်နေရသော်လည်းခေါင်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထပ်မံတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ freemium.
SoulCraft2- လှုပ်ရှားမှု RPG
ရေးသားသူ: MobileBits GmbH
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » SoulCraft 2: Angels League၊ ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆက်ဆက်
စမတ်နာရီများအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ - Today Bunting